सर्वोच्चद्वारा आइओएमका डिन शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश | Educationpati.com
सर्वोच्चद्वारा आइओएमका डिन शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश
२०७४ पुस २४ गते १०:३२मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिनबाट बर्खास्तीमा परेका डा. शशि शर्मालाई चार वर्षपछि पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ । सरकारले ८ माघ ०७० मा शर्मालाई आइओएमको डिनबाट बर्खास्त गरेको थियो । आफूलाई हटाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शर्मा १ फागुन ०७० मा सर्वोच्च पुगेका थिए ।
आफूलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई पदबाट हटाउने आधार र कारण नै नखुलाई डा. राकेश श्रीवास्तवलाई नियुक्ति गरिनु गैरकानुनी भएको भन्दै उनले रिट निवेदन हालेका थिए । शर्माको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्र्कीको इजलासले ११ फागुनमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेको थियो ।
आइतबार उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने आदेश दिएको हो । शर्माले पुनर्बहाली पाए उनको कार्यकाल २७ पुसमै सकिनेछ । पदीय उत्तरदायित्व बहन नगरेको ठहरेमा वा ठहर भएमा कार्यकारी परिषद्ले त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को नियम १९८(२) बमोजिम सफाइको मौका प्रदान गरी सो छानबिनबाट दोषी ठहर भएमा मात्रै डिन पदबाट हटाउने व्यवस्था छ । तर, शर्मालाई सो मौकासमेत नदिई पदबाट हटाइनु गैरकानुनी भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
एक दिनका लागि भने पनि डिनमा बहाली हुने डा. शर्माले बताए । गैरकानुनी रूपमा आफूलाई डिनबाट बर्खास्त गरेपछि न्यायका लागि अदालत गएकोमा चार वर्षपछि न्याय पाएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक प्रभावका आधारमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा कनिष्ठ पनि डिन बन्न थालेपछि तत्कालीन समयमा डा. गोविन्द केसी डिनको राजीनामा माग गर्दै अनशन बसेका थिए । केसीको मागको सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले शर्मालाई पदबाट हटाएर डा. राकेश श्रीवास्तवलाई नियुक्त गरेको थियो । श्रीवास्तवले राजीनामा दिएपछि हाल जगदीशप्रसाद अग्रवाल डिन छन् ।
नयाँपत्रिकामा खबर छ ।